င ရေးချ ငါချင်းအတူတူ
အောက်ကမြစ်ပါ ဖြည့်ပြီး ပေါင်းလိုက်မယ်
ငါ့ငါနဲ့ သူ့ငါ တခြားစီ…။
ငါ့ငါမှာ ငါတချို့ပေါင်းတော့ ငါတို့…
ငါဖြူ၊ ငါနီ၊ ငါပြာ၊ ငါဝါ
ငါကြီး၊ ငါလတ်၊ ငါငယ်၊ ငါပေါက်စ
ငါဝါရင့်၊ ငါဝါနု၊ ငါတက်သစ်စ၊ ငါမအူမလည်
အရောင်စုံ အရွယ်စုံလိုက်တဲ့ ငါတွေ..။
ငါ့ငါကမှ ငါ၊ ငါ့ငါနဲ့ ပေါင်းမှ ငါ
င့ါငါကို ငါ့ငါကထောက်ခံမှ ငါ
ယက္ခတွေ ကုမ္ဘာန်တွေတောင် ပါလိုက်သေး…။
သူ့ငါက ဘာဖြစ်ဖြစ် ငါ့ငါက ဘာညစ်ညစ်
သူသူငါငါ သူ့ငါနဲ့ ငါ့ငါ
ငါနဲ့ င့ါငါ ငါပေါင်းများစွာ
ဟိုက်.. ၀ိုင်နီမသောက်ဘဲ ငါကဗျာ ဖတ်ပြီး ၊ ငါ ဆိုတဲ့တယောက် မူးသွားတယ် :P
Aug 3, 2007, 9:44:00 PM
ငါ့အစ်ကိုရဲ့ ငါကဗျာဖတ်ပြီး ငါ့ကိုငါသေချာပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်တော့ ငါ့မှာလဲ ငါခွဲတွေများပါ့လားလို့...
Aug 4, 2007, 3:53:00 AM
ကိုစေးထူးရေ ကဗျာကို စိတ်နဲ့ တင်မဖတ်ပဲ အသံထွက်ပြီးရွတ်မိပါတယ်
င.ငါ တွေ ရွတ်ရလွန်းလို့ အံချော်မတတ်ပါပဲ
သတိထားမိတယ် ရွတ်တာတောင် အံချော်နိုင်ရင်
ငါလှိုင်းတွေထန်တဲ့ ဘ၀ ငါမီးတွေ ဟုန်းဟုန်းတောက်
အဲလိုလူတစ်ယောက်ဆိုရင် လူတွေနဲ့ အံမချော်ခံနိုင်ရိုးလားလို့
Just thinking naw :P
Aug 4, 2007, 5:27:00 AM
တကယ်တော့ လူတွေဟာ ငါတွေ ... အတ္တတွေ ပြိုင်နေကြတာပါပဲ။ ငါတွေပြိုင်နေကြတဲ့ ပွဲမှာ ... ဘယ်ငါကများ အနိုင်ရမှာပါလဲလို့ စဉ်းစားမိရင်း
တိပိဋက မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ လင်္ကာလေး သတိရမိလို့ ဒီနေရာမှာ တင်ခွင့်ပြုပါဦးနော်။
* ရုပ်ဟုတွင်မည်/ နာမ်ဟုတွင်မည်၊ ခန္ဓာသည်ကား၊ မြင့်ရှည်ကာလ၊ မတည်ထဘဲ၊ ခဏဖြစ်လျက်၊ ခဏပျက်၏။ ဖြစ်-ပျက် နှစ်တန်၊ နှိပ်စက်ဒဏ်ဖြင့်၊ တရံမစဲ၊ လွန်ဆင်းရဲ၏၊ ခိုင်မြဲကျောမာ၊ နှစ်မပါဘူး၊ ပညာစက္ခု၊ မြော်ထောက်ရှုလျှင်၊ သူ့သဘာဝ၊ အနိစ္စနှင့်၊ ဒုက္ခ အနတ္တာ၊ မှန်လှစွာ၏။ ငါ - ငါ့ဥစ္စာ၊ ငါ့လိပ်ပြာဟု၊ ဘာတခုမျှ၊ မဟုတ်ကြသည် ... ဓမ္မ သက်သက် ပါတကား။ ... ။
Aug 4, 2007, 5:47:00 AM
ကိုစေးထူး ကဗျာကို ဖတ်လိုက်ရတော့ အာပါးပါး ငါ့ကိုများ စောင်းရေးထားရော့လေသလားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မလုံမလဲဖြစ်မိပါရဲ့။
မကြီးမငယ်နဲ့ ရေးစရာနေရာလေးတခုရပဟဲ့လို့ အားရ၀မ်းသာ ဘလော့ဝင်ရေးကာမှ ငါဘယ်သူပဲကွ ဆိုပြိး ငါရေးဝင်ပြသလိုများ ဖြစ်နေမလားလို့ တွေးပူမိပြန်ရော။
Aug 4, 2007, 5:33:00 PM
ခန္ဓာကိုယ်မှာ ငါဘယ်မှာလဲရှာကြည့်တော့.. တကယ်တော့ ငါဆိုတာမရှိပါဘူး… ဥပမာ..ငါဆိုတယဘယ်မှာလဲ..ငါ့ရဲ့ လက်ဆိုတာရောထောက်ပြပါ..ဆိုရင် ဟင်..အဲဒါ လက်မှမဟုတ်တာ..လက်ဖမိုးကြီး..လက်ဖ၀ါးကြီး..လက်ချောင်းတွေဘဲ..ခင်ဗျားထောက်ပြနေတာ အရေပြားကြီးဘဲ..လက်မှမဟုတ်တာ…ဒါဆိုလက်ကဘယ်မှာလဲ..ငါဆိုတာရောဘယ်မှာလဲ..မရှိပါဘူးတဲ့..ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ ဖွဲ့ စည်းထားတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုအစုအ၀းကြီးပါတဲ့….
အထင်မကြီးကြပါနဲ့အုံး..ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး…ဦးဇောတိက လား ချမ်းမြေ့ ဆရာတော်လား..မမှတ်မိပါ..ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့တရားပါ….
ကဗျာခေါင်းစဉ်လေးကို Ego Racing လို့ ဘာသာပြန်ချင်ပါတယ်…
Aug 4, 2007, 6:48:00 PM
ငါ့လောက် ငါစွဲကင်းတာ ငါပဲရှိတယ် (ငါကွ)
Dec 17, 2007, 9:59:00 AM
ငါကလည်း ငါပါပဲလေ ဖတ်ပြီး ငါငါငါဖြစ်သွားတယ်း)
ခုတလော တွေ့နေရတဲ့ ငါတွေကို တရားကျမိပါရဲ့...
စိတ်တော့ မဆိုးလိုက်ပါနဲ့ ၊ ကိုစေထူးက ဟိုဒင်းအကြောင်း ကောင်းကောင်းသိနေတော့ တစ်ချိန်က ကိုစေထူးလည်း အဲဒီလှောင်အိမ်ထဲမှာ အလှောင်ခံခဲ့ရဘူးသူဖြစ်မယ်ထင်လို့ပါ၊ ဒီလိုမွမ်းကြပ်တဲ့လှောင်အိမ်ထဲက ဘယ်လိုများ ရုန်းထွက်ခဲ့ပါသလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါ....
Feb 22, 2009, 9:20:00 AM